Izilayidi: Uyilo lokuNxibelelana, uyilo lojongano lomsebenzisi, uyilo lwamava omsebenzisi | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Oktobha 4, 2013 Lwesine, Okthobha 3, 2013 Douglas Karr
Ndijonge iprojekhthi evulekileyo evulekileyo yomthombo ngokuhlwanje ibizwa ngokuba slides Apho ungalungisa khona amaphepha e-HTML kunye ne-CSS ngokudibeneyo kwisilayidi esisebenza eqongeni. Basebenza kwizixhobo eziselfowuni kunye neethebhulethi (nditsho nokuxhasa izikrini zokuchukumisa kunye nescreen esigcwele). Kwaye izilayidi zigcinwa kwi-intanethi kodwa zingaboniswa ngaphandle kweintanethi nazo! Bayangqamanisa neDropbox kwaye kunokwabelwana ngayo njengoko ndisenza apha ngezantsi!
Esi sisilayidi esihle, esifutshane UJamie Cavanaugh Ecacisa umahluko phakathi koYilo loNxibelelwano (i-IxD), uyilo lojongano lomsebenzisi (UI) kunye noyilo lwamava omsebenzisi (UX). Isifaniso sokutya, isitya kunye necephe ukusuka U-Ed Lea inobuchule.
tags: UkudibanisaixdslidesuiI-Design Experience Designuyilo lomsebenzisiux
Amanqaku obungqina kulungelelwaniso phakathi kweNqanaba leSERP kunye noMgcini weWebhu
Oktobha 4, 2013 ngo-1: 15 PM
Iposti eyodwa, Enkosi